Qalabka Garment bir rintestone faashad geedka balaastigga ubaxa, tolo caag rhinestone tri ...
Dhagaxyo k9 teardrop rhinestones dhagxaan qaali ah, oo tayo sare leh dhammaan noocyada faneedka dhalada dib ujecel ...
Bohemian fashion bead handmade mens dahabka jijimooyinka, jijimooyin jumladeed oo jumlaad ah
Qalabka wax lagu qoro ee buluuga ah ee loo yaqaan 'rhinestone' xariga xargaha balaastiigga ah ee ubaxa, tolo wejiga caagagga rhinestone
Bandhiga Rhinestone, silsiladda Rhinestone iyo goynta, in kabadan 80 nooc oo midabyo ah, Aqbal midabka macaamiisha, Dharka Qurxinta / Dharka / Kabaha / Bacaha / Alaabada / Qurxinta / Dharka Guryaha. Faashadda balaastigga ah ee Rhinestone iyadoo loo eegayo tirada xariijimaha, waxaa jira laylisyo hal khad ah iyo tababbarrado xariijin badan.
Intooda badan waxaan xirnaa jaakado maxaa yeelay, si fiican waxaan u jecel nahay sida ay u egtahay. Xirashada dahabka ayaa noqon kara hab lagu muujiyo nafsaddaada, oo lagu dhammaystiro koox, iyo bayaan lagu sameeyo. Jewelry waxay had iyo jeer door muhiim ah ka cayaartay nolosha haweenka waxayna meel gaar ah ka haysaa nolosheeda. Jewelry sidoo kale waxay saameyn ku leedahay nolosha haweenka shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba.
Nail tayo sare leh oo gadaal ah oo quraarad ah oo aan lahayn xarkaha ciribta dhagaxa kulul
Rhinestones Austrian iyo Czech hothotfix, labadan waa tayo tayo sare leh, oo aan ku ekaaneyn dhalaal, tayo iyo wixii la mid ah. Tayada ayaa ku dhawaad ​​gaari karta boqolkiiba 100 gudbista, laakiin qiimaha ayaa sarreeya, oo ku habboon saacadaha, suumanka, boorsooyinka, iwm iyo waxyaabaha kale ee aadka u sareeya ee u baahan rhinestone ka yar. Marka loo eego rhinestones-ka gudaha, way adagtahay in la gaaro isla tayadaas, laakiin sidoo kale waa mid aad u fiican, kuna habboon dharka, dharka, qurxinta iwm. Tan ka sii muhiimsan, saami-howleedkiisa ayaa ugu sarreeya.